China Waterproof Board sy Rebar Work Trolley orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Waterproof Board And Rebar Work Trolley dia tonelina tantera-drano birao fametrahana fitaovana, miaraka amin'ny mandeha ho azy fametrahana tantera-drano birao sy ny fanandratana, mamatotra peratra sy longitudinal manamafy bar asa, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny lalamby, lalambe, rano conservancy sy ny saha hafa.
Tantera-drano Board And Rebar Work Trolley dia afaka manome fahafaham-po ny fametrahana ny 6,5 metatra ny sakany tantera-drano birao, ary afaka hihaona indray mandeha ny 12 metatra vy bar.
Olona 2 ~ 3 ihany no afaka mametraka ny board tantera-drano.
Fiakarana amin'ny coils, fiparitahana mandeha ho azy, tsy misy fanandratana soroka manual.
2. Wireless fanaraha-maso lavitra dia mora ny miasa
Tantera-drano Board And Rebar Work Trolley fanaraha-maso lavitra fandidiana, miaraka amin'ny longitudinal mandeha sy marindrano asa fandikana;
Olona iray ihany no afaka mifehy ny fiara.
3. Tsara kalitaon'ny fanorenana
solaitra tsy tantera-drano mametraka malama sy tsara tarehy;
Ny vy mamatotra ambonin'ny sehatra miasa dia rakotra tanteraka.
1. Ny trolley dia mampiasa drafitra an-dalana / lalamby, izay azo ampiasaina amin'ny tonelina maromaro mba hisorohana ny fandaniam-bola.
2. Ny paving tantera-drano dia mampiasa fanaraha-maso lavitra mba hampihenana ny hamafin'ny asa sy hampihenana ny isan'ny mpiasa
3. Ny sandry miasa dia afaka mihodina malalaka sy manitatra, ny fandidiana dia malefaka, ary azo ampifanarahana amin'ny fizarana tonelina samihafa
4. Ny mekanika mandeha dia azo ampiasaina amin'ny karazana mandeha na karazana kodiarana, tsy misy fametrahana lalana, ary azo afindra haingana any amin'ny toerana voatondro ho an'ny fanorenana, mampihena ny fotoana fanomanana fanorenana
5. Ny fitaovana fizarazarana karazana vy bara fitehirizana sy ny fampitana fitaovana, miaraka amin'ny vy bara sakafo, mandeha ho azy fihodinana sy longitudinal hetsika positioning asa, tsy ilaina ny tanana mitondra ny vy bara, mampihena be ny mpiasa sy ny fampihenana ny isan'ny mpandraharaha.
teo aloha: Rock Drill
Manaraka: Milina famafazana mando